प्रधानमन्त्री भट्टराई जंगबहादुर बन्दै - Kavre Times Weekly | Kavre Times Weekly
प्रधानमन्त्री भट्टराई जंगबहादुर बन्दै
० आर.एल. श्रमजीवी
संविधानसभा भंग भएको एक महिना बित्दा पनि दलहरुले देशलाई निकास दिन सकेका छैनन् । संविधानसभाबाटै राष्ट्रपति चुनिएका डा. रामवरण यादव यतिबेला डा. भट्टराईको काम चलाउ सरकारबाट कसरी हटाउने र देशलाई निकास दिने भनेर सबै दलसँग परामर्श गर्न व्यस्त छन् । राष्ट्रपतिले यो साता नयाँ कदम चाल्ने हल्लाहरु पनि आइरहेका छन् । तिनमा कति सत्यता छ त्यो अहिले नै विश्लेषण गर्न सकिन्न । एमाओवादी बाहेकका दलहरुको गतिविधि हेर्दा उनीहरु अलमलमा छन् । काँग्रेस, एमाले, सत्तामा भएका मधेशी दल र बाहिर रहेका मधेृशी दल सबैमा विवाद छ । नयाँ माओवादी पार्टीले राष्ट्रपतिलाई गुहारेको छ जसरी पनि बाबुराम सरकारलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ ।
तर प्रम डा. बाबुराम भट्टराई एकपछि अर्को कठोर बन्दै जंगबहादुर बन्न थाल्नुभएको छ । हिजो त्रिभुवन विमानस्थलमा उत्रनासाथ निर्वाचित सरकार नबनेसम्म राजीनामा पनि नदिने बताएका छन् । विपक्षी कांग्रेस र एमालेले सहमतिका लागि प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई पहिलो सर्त बनाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री भट्टराईले भने कसैले माग्दैमा राजीनामा नदिने प्रष्ट पार्नुभयो । ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा भएको दिगो विकाससम्वन्धी सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्किएपछि सोमबार त्रिभुवन विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो – व्यवस्थापिका संसद नबनेसम्म अर्को सरकार वैधानिक सरकार बन्ने ठाउँ छैन, यसमा प्रष्ट रहन म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । जतिवेला व्यवस्थापिका संसदको समेत काम गरिरहेको संविधानसभा विघटन हुन पुग्यो, त्यसबेला यो सरकार वैधताप्राप्त बहुमत प्राप्त थियो र अर्को व्यवस्थापिका संसद नबनेसम्म यो सरकारको विकल्प छैन । निर्वाचनबाट व्यवस्थापिका संसद बनेर अर्को सरकार नबनेसम्म यो सरकार रहन्छ । यसमा सबै जना प्रष्ट रहनु भए हुन्छ ।’
अहिलेकै अवस्थामा आफूले राजीनामा दिए मुलुक माघ १९ पछिको अवस्थामा फर्कने भन्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले राजीनामा नदिने प्रष्ट पार्नुभयो । ‘यतिबेला संवैधानिक संकट सृजना गर्ने काम मबाट हुँदैन । मैले मैदान छोड्नु भएको संवैधानिक र राजनीतिक शुन्यता र संकट पैदा हुनु हो । माघ १९ जस्तो बन्ने स्थिति आउँछ । त्यस्तो गर्न हुँदैन र त्यो गर्ने पक्षमा म छैन ।’ प्रधानमन्त्री भट्टराईले विपक्षी गरेको आफ्नो राजीनामा मागलाई बालहठको संज्ञा दिनुभयो । ‘बालहट जस्तो, बच्चाले त्यही चाहियो भनेर आफूले भनेको जस्तो खेलौना नपाउँदासम्म रुन्छ । आफ्नो टाउको ठोक्छ र विस्तार अन्यत्रै लाग्छ’ उहाँले भन्नुभयो – प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी भनेको बच्चाको खेलौना हैन । कसैले माग्दैमा मैले राजीनामा दिने कुरै आउँदैन ।’
प्रधानमन्त्री आउन लागेको थाहा पाएका विपक्षी दलहरु अघिल्लो हप्ताजस्तै प्रदर्शनको लागि विमानस्थल पुगे । अघिल्लो हप्ता तोडफोड र कालोझण्डा प्रदर्शन भएको कारण सोमबार प्रहरीले विमानस्थल आसपासको क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पा¥यो । विमानस्थलको मूल गेट आसपासमा कसैलाई उभिन र हेर्न पनि दिएन । बानेश्वरदेखि विमानस्थलसम्मको सडकमा गाडी गुड्न पनि रोक लगाइयो । सुनसान सडकमा नाराबाजी गर्न खोज्नेहरुलाई पनि प्रहरीले समातेर राख्यो । दुई दर्जनभन्दा बढीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको नेविसंघले जनाएको छ ।
डा. भट्टराईलाई असाध्यै राम्रो नेता भन्दाभन्दै भट्टराईकै पालामा संविधान आएन । सेना समायोजन अन्तिम निष्कर्षमा पुगेन र देशमा संवैधानिक संकट चुलियो । महँगी, अभाव, हाहाकार सधैं छ । यसरी कति दिन चल्छ यो देश ?
Very good analysis, baburam jati asafal primeminister aru bhayenan. Sher bd deuwa bhanda pani asachhayam bhayo..
bhattarai rajanibala says:
bhattaraiko kam chalau sarkar ki kam chalau sarkarbat baburam ani aspasta jasto lago. padher t jasle j artha lae pani vanae prast vae sankoch rahane thienki?